Vol. 17 MAY, 1913. Tsia
MANIRY ny asa ny sain'olombelona, ​​nefa mahalana na tsy mieritreritra momba izany mihitsy izy vao fantany hoe inona izany, ahoana ny fomba fiasa, inona ny fampiasana, inona no dingana sy vokatry ny asa, ary inona no tena tanjon'ny sary an-tsaina. . Toy ny teny hafa, toy ny hevitra, ny saina, ny eritreritra, dia mazàna no ampiasaina matetika na tsy misy dikany mazava. Ny olona dia miresaka sary an-tsaina amin'ny fiderana, toy ny fahatsarana na toetran'ny lehilahy lehibe izay ny fahaizany sy ny heriny no namorona ny faritany amin'ny firenena sy izao tontolo izao; ary ireo olona mitovy aminy ihany no hiteny azy io hoe toetran'ny hafa tsy azo ampiharina, izay manana fahamaotinana sy malemy paika; fa ny fahitana ny toa azy dia tsy misy ilàna azy, ny nofinofin'izy ireo dia tsy miandany velively, manantena izay tsy hiseho intsony izy ireo; ary, izy ireo dia jerena amin'ny famindram-po na fanamavoana.
Mbola hitohy ny fahatsiarovan-tena. Hoentina any amin'ny havoana izy io ary ny hafa mankany amin'ny lalina. Mety hahatonga na tsy mahavita lehilahy izany.
Ny fakana sary an-tsaina dia tsy nebula tsy takatry ny nofinofy, ny haingo, ny haingo, ny nofinofy, ny havoana, ny fanamarihana tsy misy fangarony. Manao zavatra ny fisaintsainana. Ny zavatra atao dia atao sary an-tsaina. Ny atao amin'ny sary an-tsaina dia tena misy amin'ilay manao azy fa ny vokatry ny sary an-tsaina rehefa ampiasaina amin'ny fampiasana ara-batana.
Izany no zava-misy amin'ny olona izay fantany. Mahatakatra ny zava-drehetra ny olombelona amin'ny fampidirany azy na amin'ny fampitodiana azy ireo. Tsy azony izay zavatra fantany, mandra-paha-nomeny ny masony sy hiezaka ny handinika sy hahatakatra izany. Rehefa mieritreritra sy manandrana ny hahatakatra azy izy, ny sary an-tsaina dia hamorona endriny vaovao ho azy; hahita dikany vaovao izy amin'ny endriny taloha; dia hianatra ny hanao endrika; ary hahatakatra izy ary hiandrandra ny kanto farany an-tsaina, amin'ny endrika tsy mihetsika sy fanaovana endrika.
Tsy miankina amin'ny fotoana na ny toerana misy an-tsaina ny fakana an-tsaina, na dia indraindray ny fahitana ny sary ao amin'ny olona dia mavitrika sy mavitrika kokoa noho ny an'ny hafa, ary misy toerana tsara kokoa noho ny hafa amin'ny asa fa tsy ny filalaovana. Miankina amin'ny finiavana, ny hasina, ny toetra, ny fivoaran'ny tsirairay. Ny fotoana sy ny toerana dia misy ifandraisany amin'ny mpanonofy maniry zavatra hitranga ary miandry fotoana sy fanoharana izy fa ny sary kosa dia mamorona fotoana, manosika azy ho eo aminy, mahatonga ny zava-mitranga. Miaraka aminy, ny saina dia miasa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Ireo izay mieritreritra dia ratsy na lafy ratra, mavitrika na mavitrika, manonofy na sary an-tsaina. Ny eritreritry ny mpanonofy dia aroson'ny saina sy ny zavatra entiny; ny fisainana an-tsaina ange no tena mararin'ny sainy. Ny manonofy dia mora tohina sy tsy mitanila, ilay sary an-tsaina izay sarotiny ary tsara. Ny mpanonofy dia ny fisainany, amin'ny alàlan'ny fahaizany sary, no taratry ny sain'ireo fieritreretana na ireo eritreritra, ary iza no tadiaviny. Ny fakana sary na imaginator dia olona iray izay mamita ny fahaizany fakana sary, raharaha amin'ny endriny, tarihin'ny fisainany, araka ny fahalalany ary voafaritry ny herin'ny sitrapony. Ny eritreritra manelingelina sy ny feo sy feo matevina dia manintona ilay mpanonofy. Manaraka azy ireo ny sainy ary milalao amin'izy ireo amin'ny volon'izy ireo, na voafandrika ary mitazona azy ireo, ary ny fakampianarany sary dia voatosika ary terena hanome azy ireo amin'ny heviny araka ny fitarihany. Ilay sary an-tsaina dia mampifandona ny foto-keviny amin'ny sariny ary manidy ny sainy amin'ny fieritreretana tsy miova mandra-pahitany ny heviny. Toy ny atsipy ao am-bohon'ny tany ny voa, dia toy izany koa ny eritreritra nomen'ny mpampianatra sary. Ny eritreritra hafa dia voahilika.
Ny fialan-tsasatra farany amin'ny fahalalana tsy takatry ny saina sy amin'ny herin'ny sitrapo, ny saina dia mandrisika ny fakana sary miaraka amin'ny fisainany mandra-pahafantanan'ny asan'ny sain-tsaina. Araka ny fahalalàn'ny fahalalana an-tsaina sy amin'ny herin'ny sitrapo, maka aina ny fakana sary. Ny saina dia avy eo ampiasaina ary miasa tsirairay amin'ny asan'ny eritreritra. Ny eritreritra izay namboarina ho sary an-tsaina, dia ny endrika ivon-kevitr'ireo vondrona na vondrona maromaro, izay maka ny lokony avy aminy ary misy fiantraikany mandra-pahavitana ny asan'ny eritreritra.
Ny fomba fiasan'ny fakana sary dia aseho amin'ny tranga mpanoratra. Amin'ny alàlan'ny fisaintsainana dia mamadika ny sainy ho an'ny lohahevitra tiany hiteraka izy ary manaitra ny fony araka ny heviny. Tsy afaka manampy azy ny fahatsapan-javatra, manelingelina sy misafotofoto izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fieritreretana hatrany, dia nohajainy sy napetrany ny jiron'ny sainy mandra-pahitany ny foto-kevitry ny eritreriny. Mety ho tonga ao an-tsainy ara-tsaina ilay izy fa toy ny zavona madinidinika. Mety hiseho amin'ny feo manontolo tahaka ny tselatra na tara-pahazavana avy amin'ny fiposahan'ny masoandro. Tsy hevitry ny saina akory izany. Inona izany no tokony ho takatry ny sain-tsaina. Avy eo ny asany dia ny asany dia miasa, ary ny fahatsapan-tena dia mavitrika amin'ny fidiram-bolan'ny olona izay omen'ny mpampianatra azy. Ny zavatr'izao tontolo izao tsy misy ampiasaina dia afaka ampiasaina ho fitaovana enti-mandrafitra ny foto-kevitra ao amin'ny tontolony. Rehefa mitombo ny tarehin-tsoratra dia miteraka anjara amin'ny alàlan'ny feo na fihetsika na endriny na vatana ny tsirairay. Samy mamelona azy amin'ny tontolo iainany izay niantsoan'ny mpanoratra tamin'ny alàlan'ny asa an-tsaina.
Azo atao ny mamina-tsaina raha ny olombelona rehetra. Amin'ny hery sy fahaiza-manao sasany dia voafetra amin'ny mari-pahaizana kely; miaraka amin'ny hafa niforona tamin'ny fomba miavaka.
Ny herin'ny sary an-tsaina dia: ny hery maniry, ny fisainana, ny hery manorina, ny fahefana misaina, ny fahefana mihetsika. Ny faniriana dia ny fizotran'ny fo mibontsina, matanjaka, manintona ary tsy ampy saina, mitaky fitenenana sy fahafaham-po amin'ny alàlan'ny fahatsapana. Ny fisainana dia ny fifantohan'ny saina ao anaty foto-kevitra. Ny sitrapo no fanerena, amin'ny fisainana, amin'izay zavatra nofidin'ny olona iray. Ny fahatsapana dia ny fampitana ireo fahatsapana voaray amin'ny alàlan'ny taovan'ny fahatsapana mankany an-tsaina. Ny fihetsika no manao izay irin'ny olona na sitrapony.
Ireo hery ireo dia avy amin'ny fahalalana efa azon'ny saina taloha. Tsy marina ny hevitr'ireo malaza, fa ny zavakanto sary an-tsaina dia fanomezana avy amin'ny natiora, fa ny hery ampiasaina amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina dia fanafiana voajanahary na vokatry ny lova. Ny teny hoe fanomezana ny natiora, ny lova sy ny fananana dia tsy avy amin'ny ezaka nataon'ny lehilahy irery ihany. Ny zava-kanto sy endowan'ny eritreritra ary ny hery ampiasaina amin'ny fakana sary dia ny lova amin'izao fiainana ankehitriny izao ampahan'ny ampahany azon'ny lehilahy tamin'ny fiezahana tamin'ny fiainany taloha. Ireo izay zara raha manana hery kely na maniry ny hanana sary an-tsaina dia nanao ezaka kely mba hahazoana izany.
Azo atao ny mamolavola sary an-tsaina. Ireo manana kely dia mety hanana fivoarana betsaka. Ireo izay manana betsaka dia mety handroso bebe kokoa. Fanampiana ny saina, fa tsy midika amin'ny fivoarana sary an-tsaina. Ny fahatsapana diso dia ho fanampiana tsy mety, saingy tsy afaka manakana ny fitrandrahana sary izany.
Ny fisainana an-tsaina dia azo avy amin'ny fifehezana sy ny fampiasana ny saina amin'ny asan'ny eritreritra. Mba hifehezana ny saina hisaintsainana, dia misafidy lohahevitra abstract ary mieritrereta momba izany amin'ny fotoana tsy miova mandra-pahitan'ny saina azy.
Ny iray dia mamolavola sary an-tsaina amin'ny ambaratonga izay anafahany ny saina. Ny kolontsain'ny saina dia manome lanja miavaka amin'ny vokatry ny asan'ny eritreritra. Fa ny zavakanto ao an-tsaina dia miorim-paka ao an-tsaina ary ampitaina na amin'ny alàlan'ny fahatsiarovan-tsaina amin'ny alàlan'ny fahaiza-misaina izay misy ifandraisany amin'ny eritreritra.
Ho fehiny amin'ny laharan'ny Jona